Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Ny trano fandraisam-bahiny Hawaii dia mahita ny fihenan'ny fidiram-bola sy ny fivezivezena
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany momba ny Hawaii • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny indostrian'ny hotely any Hawaii dia nahita fihenam-bidy tamin'ny volana septambra RevPAR sy ny fibodoana manerana ny fanjakana raha oharina tamin'ny septambra 2019, ny ampahany noho ny vokatry ny Delta izay nanohitra ny fangatahana dia.
Ny trano fandraisam-bahiny Hawaii RevPAR dia nidina 13.5% tamin'ny volana septambra 2021 raha oharina tamin'ny septambra 2019 noho ny fisian'ny olona ambany.
Ny hotely Hawaii dia mbola mitarika ny firenena amin'ny RevPAR sy ADR.
Nandritra ny sivy volana voalohany tamin'ny 2021, notohizan'ny areti-mifindra COVID-19 ny fahombiazan'ny hotely Hawaii nanerana ny fanjakana.
Ny trano fandraisam-bahiny Hawaii dia nanambara ny fidiram-bola avo lenta isaky ny efitrano misy (RevPAR), ny salan'isa isan'andro (ADR), ary ny fipetrahana amin'ny volana septambra 2021 raha oharina tamin'ny septambra 2020 raha ny kaomandin'ny fanjakana natokana ho an'ny mpandeha noho ny areti-mandringana COVID-19 dia niteraka fihenam-bidy lehibe ho an'ny indostrian'ny hotely. Raha ampitahaina tamin'ny volana septambra 2019 dia avo kokoa ny ADR manerana ny fanjakana tamin'ny volana septambra 2021 fa ny RevPAR dia ambany noho ny tsy dia be olona.
Araka ny Tatitra momba ny Hawaii Hotel Performance navoakan'ny Fahefana fizahan-tany any Hawaii (HTA), RevPAR nanerana ny fanjakana tamin'ny volana septambra 2021 dia $ 168 (+ 442.6%), miaraka amin'ny ADR amin'ny $ 304 (+ 102.7%) ary ny fivezivezena 55.2 isan-jato (+34.6% isan-jato) raha oharina tamin'ny volana septambra 2020. Raha oharina tamin'ny volana septambra 2019, ny RevPAR dia 13.5 isan-jato ambany, tarihin'ny olona ambany (-23.8 isan-jato isa) izay tsy azo ampidirina amin'ny fitomboan'ny ADR (+ 23.7%).
"Ny indostrian'ny hotely any Hawaii dia nahita fihenam-bidy tamin'ny volana septambra RevPAR sy ny fibodoana manerana ny fanjakana raha oharina tamin'ny septambra 2019, ny ampahany noho ny vokatry ny Delta izay nanohitra ny fangatahana dia," hoy i John De Fries, filoha lefitry ny HTA. "Mampahatsiahy antsika io fa tsy vita ny areti-mandringana ary tokony hiambina hatrany isika mba hitandroana ny filaminana sy ny fanarenana ara-toekarena ny vondrom-piarahamonina misy antsika."
Ny valin'ny tatitra dia nampiasa angon-drakitra namboarin'ny STR, Inc., izay manao ny fanadihadiana lehibe indrindra sy feno momba ny trano fandraisam-bahiny ao amin'ny Nosy Hawaii. Ho an'ny volana septambra, ny fanadihadiana dia nahitana fananana 144 maneho efitrano 46,094, na 85.4 isanjaton'ny trano fandraisam-bahiny ary 86.0 isan-jaton'ny trano fandraisam-bahiny misy efitrano 20 na mihoatra ao amin'ny Nosy Hawaii, ao anatin'izany ireo manolotra serivisy feno, serivisy voafetra ary trano fandraisam-bahiny. Ny fanofana fialan-tsasatra sy ny fananana fizarana ora dia tsy tafiditra ao amin'ity fanadihadiana ity.
Tamin'ny volana septambra 2021, ny mpandeha tonga avy any ivelan'ny fanjakana dia afaka nanadino ny fividianana tena maharitra 10 andro an'ny fanjakana raha nanao vaksiny tanteraka tany Etazonia izy ireo na nisy valin'ny fitsapana COVID-19 NAAT ratsy avy amin'ny mpiara-miasa amin'ny fitiliana azo antoka talohan'ny ny fialany tamin'ny alàlan'ny programa Safe Travels. Tamin'ny 23 Aogositra 2021, Governoran'i Hawaii David Ige nanentana ny mpandeha hamehezana ny dia tsy ilaina izy mandra-pahatapitry ny volana oktobra 2021 noho ny Delta variant ka nahatonga ny rafitry ny fitsaboana ara-pahasalamana be loatra ny fanjakana.